Ingabe kukhona ukumbozwa kokusebenzisa iselula kuhambo olwandle? | Izikebhe ze-Absolut
Ingabe kukhona ukumbozwa kokusebenzisa iselula kuhambo olwandle?
Abanye benu basibuze ukuthi ungayisebenzisa yini ifoni yakho ephathekayo emikhumbi ye-cruise. Uma ufuna imininingwane kwi-Intanethi, uzokwesaba, ngoba kube khona futhi kwabikwa amacala wabasebenzisi abakhokhe kufika kuma-euro angama-800 kubhili yeselula yabo ngenxa yokusebenzisa izingcingo. Leli icala elibi kakhulu, kepha kusuka kuma-absolutcruceros sifuna ukukuxwayisa ngalokho ukusebenzisa ifoni yakho ephathekayo kuzokhuphula isikweletu sakho, kuzoncika kangakanani enkampanini yakho.
Iseluleko sethu sokuqala ukuthi ngqo shayela umhlinzeki wakho weselula futhi uzazise kahle, Ngokuya ngohambo lwakho, yikuphi ukumbozwa namanani okufanele uwasebenzise noma akufonele ocingweni lwakho. Futhi manje ukuthola amanye amathiphu.
1 Esikebheni iselula kumodi yendiza
2 Ukuzulazula kolwandle
3 Izinkampani zokuthumela nokusetshenziswa kweselula
4 Izingcingo zomhlaba jikelele ezinamakhadi akhokhelwa kusengaphambili
Esikebheni iselula kumodi yendiza
Sincoma lokho ngenkathi upheqa vala ifoni ephathekayo ivaliwe, noma uma uyikhetha ngemodi yendiza, ngakho-ke ngeke ixhumeke kunoma iyiphi inethiwekhi, nayo ngeke iyicinge futhi izokhipha ibhethri futhi uzokwazi ukuthatha zonke izithombe noma urekhode amavidiyo owafunayo.
Enye inketho, kepha sincoma eyokuqala, ngukuthi vumela ukukhetha kwenethiwekhi ngesandla bese uvimbela ukukhetha okuzenzakalelayo kumasethingi efoni yakho. Ngale ndlela uzoqiniseka ukuthi ayixhunyiwe ngephutha kunoma iyiphi inethiwekhi noma kunethiwekhi yesethelayithi yesikebhe. Okubi ukuthi ifoni yakho izoba yiyo yonke
Uma udinga ukuxhumana, esikebheni ungathatha amadivayisi weselula njengamathebulethi noma ama-laptops, futhi ngokuxhumeka kwe-inthanethi ungathola amabhonasi ngomzuzu. Besivele sikhuluma ngendlela yokusebenzisa i-Intanethi esikebheni Lesi sihloko.
Njengamanje, abahlinzeki abakhulu bezingcingo eziphathwayo sebesivele banikela ngamaphakeji wokuhamba ngomkhumbi ukuze wena sebenzisa inombolo yakho efanayo kazwelonke. Shayela ucingo noma ubhekabheke iwebhusayithi yabo bese ubenza bachaze kahle ukuthi yiziphi izinketho onazo, futhi qaphela! ngoba lokho esikwaziyo njengokuzula nokuthi eYurophu akusekho phakathi kwamazwe e-EU, akufani nokuthi Ukuzulazula kolwandle.
Sithathe ikhasi le-Orange njengesibonelo, kulo bachaza ukuzulazula nakwelinye lamathebhu abachazayo Izembozo Zasolwandle Nezesathelayithi. Kulokhu (kuyisibonelo) banokuthintana nabahlinzeki bokumboza olwandle abalandelayo:
I-Oceancel - (Siminn Network): € 10,31 / min (i-VAT incl.)
I-Telecom Italia Mobile (TIM): € 10,31 / min (i-VAT incl.)
I-MCP: € 10,31 / iminithi (i-VAT incl.)
Ukuhamba kwe-AT & T: € 10,31 / min (VAT kuhl.)
I-Seanet Maritime: € 10,31 / min (i-VAT incl.)
Ngezindleko zokusungula izingcingo: € 0,73 (kufakwe i-VAT) yezingcingo ezenziwe nezamukelwe. Izinga lisetshenziswa ngomzuzwana kusuka kusekhondi yokuqala. Ngaphandle kwalaba basebenzisi bezasolwandle ngocingo, banikeza imininingwane ngesathelayithi okwenziwa ngayo ukuxhumana, lapho ulwandle lungenakwenzeka, nezindleko zalo.
Izinkampani zokuthumela nokusetshenziswa kweselula
Zonke izinkampani ezinkulu zemikhumbi sezivele zinikela ngenkonzo yeselula olwandle oluphakeme, ngaphakathi komkhumbi. Kulokhu kufanele ulungiselele ifoni, ukuze inkampani yakho izokusiza, Amaselula Olwandle, esimweni seNorway Cruise Line, ngokwesibonelo. Ngokuya ngemodeli yefoni onayo, ixhuma kunethiwekhi lapho ivela: amaselulaatsea, wmsatsea, NOR-18 noma 901-18.
Le sevisi yocingo lweselula esemikhunjini ye-NCL is itholakala emanzini aphesheya (leli ibanga lamamayela ayi-12 nautical noma ngaphezulu ukusuka ogwini) bese unqamuka ngokuzenzakalela lapho umkhumbi ufinyelela ethekwini noma usondela ogwini. Amanani yilokho umhlinzeki wakho akutshela khona, inkampani yokuthumela isiza kuphela ukuxhumana.
Izingcingo zomhlaba jikelele ezinamakhadi akhokhelwa kusengaphambili
Enye inketho ye- is shaya izingcingo zomhlaba jikelele ngekhadi elikhokhelwe kusengaphambili ukushayela ngaphesheya. Lawa makhadi avame ukuthengiswa emkhunjini uqobo, emachwebeni, ezinxanxatheleni zezitolo nakwezinye izinhlobo zezikhungo. Kuzofanele shaya kusuka kunombolo ehlukile kweyakho futhi ngeke ukwazi ukuthola izingcingo eziya enombolweni yakho, kepha uzoxhunywa kanye nesiqinisekiso sokukhokha kusengaphambili.
Sithemba ukuthi sikusizile futhi, ukhumbule iseluleko sethu sokuqala, lapho ugibele, kungcono ukucisha iselula yakho.
Ngingaba nentengo engakanani nge-Wi-Fi ne-Intanethi esikebheni?
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » General » Ingabe kukhona ukumbozwa kokusebenzisa iselula kuhambo olwandle?